Fanondranana an-tsokosoko nandritra ny volana martsa 2016 | Douanes Madagascar
Nisesisesy nandritra ny volana Martsa ny zavatra teny amin’ny seram-piaramanidina Ivato. Misy foana mantsy ireo mitady fomba isan-karazany handefasana entana an-tsokosoko. Tsy mikely soroka koa anefa ny Fadintseranana miezaka hatrany hiaro ny harem-pirenena. Anisan’ny tratra tamin’izany ny volamena milanja roa kilao sy sasany tao amin’ny entan’ny karàna iray.
Tena fetsy tokoa izy satria nataony tsara afina tao anaty fitaovana fanaingana fiara (crique) ireo volamena vaingany sy ny vovom-bolamena voadio efa tao anaty tavoahangy kely. Efa matihanina anefa ireo mpiasan’ny Fadintseranana ka tratra ihany ireo volamena ireo ary efa nogihazana.
Mbola nisy koa volamena iray kilao tratra teny amin’ireo teratany avy any Sri Lanka, izay tsy nananan’izy ireo ny taratasy ilaina mikasika izany. Sady enjehin’ny lalan’ny Fadin-tseranana izy ireo noho izany, no enjein’ny lalàna momba ny fifanakalozana ihany koa. Efa nogihazana ihany koa ireo volamena ireo.
Anisan’ireo entana tena alefan’ny olona an-tsokosoko koa ny sokatra ary misy hatrany ireo tratra eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Tsy eny ihany anefa no manao ny asany ny mpiasan’ny Fadintseranana, fa miezaka hatrany izy ireo hanao fanadihadiana ifotony, ka nisy zana-tsokatra miisa 101 tratra teny amin’ny tranon’olona teny amin’ny 67ha tamin’iny volana martsa iny. Mbola tsy fantatra marina tamin’ny fotoana nahatratrarana azy hoe kasaina halefa aiza ireo sokatra kely ireto. Tsara ho marihana fa anisan’ny biby atahorana ho lany tamingana ny sokatra ary misy ny lalana CITES miaro ny azy io.